အောက်ပိုင်း အတွင်းသား အလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုချပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အောက်ပိုင်း အတွင်းသား အလှလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုချပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
မော်ဒယ်လ် မင်းသမီး ချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ က တော့ သွက်သွက် လက်လက် နဲ့ အရမ်း ကို ချစ်ဖို့ ကောင်း တဲ့ ကောင်မ လေး တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ လူငယ် ဆန်ဆန် လွတ်လပ် ပေါ့ပါး စွာ နေထိုင် တတ်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ က အမြဲ တမ်း လန်းဆန်း တက်ကြွ နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဆောင်းယွန်းစံ က ပျော်ပျော် နေတတ် သလို မာန်မာန တွေလည်း ကင်းတာ ကြောင့် ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေ ရော မိန်းက လေး ပရိသတ် တွေပါ သူမကို ချစ်ခင် ကြတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ အနေနဲ့ က တော့ ဆောင်းယွန်းစံ က ဇာတ်ကား တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေ ရိုက်ကူး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ Photo Shooting တွေ လည်း လက်ခံ ရိုက်ကူး နေရတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ က အောင်မြင်မှု တွေနဲ့ အနုပညာ လောကမှာ ရပ်တည် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီနေ့မှာ လည်း ဆောင်းယွန်းစံ က ရှုတင် လေးတစ်ခု အတွက် အလှပြင် ရင်း အပျင်းပြေ ဗီဒီယို လေးရိုက်ခဲ့ သေးတာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဆောင်းယွန်းစံ က ရေပန်းစား နေတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် နဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကိုအပီ အပြင်လှုပ်ခါ ကာ ကပြ ခဲ့ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဝင်းမွတ် စိုပြေ တဲ့အသား အရေ လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ က တော့ မှန်ရှေ့ မှာ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့ ထိုင်ပြီး ဗီဒီယို ရိုက်ကူး ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေ ပေါ်လွင်နေ တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယို လေးကို ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက်ပါတယ် နော် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေဆာင္းယြန္းစံ က ေတာ့ သြက္သြက္ လက္လက္ နဲ႔ အရမ္း ကို ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္း တဲ့ ေကာင္မ ေလး တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ လူငယ္ ဆန္ဆန္ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါး စြာ ေနထိုင္ တတ္တဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က အျမဲ တမ္း လန္းဆန္း တက္ႂကြ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေဆာင္းယြန္းစံ က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတတ္ သလို မာန္မာန ေတြလည္း ကင္းတာ ေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ေတြ ေရာ မိန္းက ေလး ပရိသတ္ ေတြပါ သူမကို ခ်စ္ခင္ ၾကတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ အေနနဲ႔ က ေတာ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က ဇာတ္ကား ေတြနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြ ရိုက္ကူး ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ Photo Shooting ေတြ လည္း လက္ခံ ရိုက္ကူး ေနရတဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က ေအာင္ျမင္မႈ ေတြနဲ႔ အႏုပညာ ေလာကမွာ ရပ္တည္ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒီေန႔မွာ လည္း ေဆာင္းယြန္းစံ က ရႈတင္ ေလးတစ္ခု အတြက္ အလွျပင္ ရင္း အပ်င္းေျပ ဗီဒီယို ေလးရိုက္ခဲ့ ေသးတာ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ေဆာင္းယြန္းစံ က ေရပန္းစား ေနတဲ့ သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္ နဲ႔ ကိုယ္လုံးေလး ကိုအပီ အျပင္လႈပ္ခါ ကာ ကၿပ ခဲ့ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဝင္းမြတ္ စိုေၿပ တဲ့အသား အေရ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ က ေတာ့ မွန္ေရွ႕ မွာ ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံစံေလးနဲ႔ ထိုင္ၿပီး ဗီဒီယို ရိုက္ကူး ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွတရား ေတြ ေပၚလြင္ေန တဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံရဲ့ ဗီဒီယို ေလးကို ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post အသဲယားစရာ အမူအယာလေးနဲ့ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဗီဒီယိုလေး
Next post အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ တကိုယ်လုံးလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတို့အကြိုက် ကပြထားတဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး